ရွှေနိုင်ငံ: တိုက်တန်းနစ် သင်္ဘော တကယ်မမြှုပ်ခဲ့
တိုက်တန်းနစ် သင်္ဘော တကယ်မမြှုပ်ခဲ့
အများစု သိထားတာက ၂၀ ရာစုရဲ့  အကြီးမားဆုံး ရေကြောင်း အက်ဆီးဒန့် ဖြစ်တဲ့ တိုက်တန်းနစ်ဟာ နှစ်မြှုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် တကယ် မနှစ်မြှုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုလည်း အင်ဂျင်နေယာ
Robin Gardiner က သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ Titanic: The Ship That Never Sank? အမည်ရ စာအုပ်နဲ့ ဖြစ် ပါတယ်။ အမှန်တော့ တကယ် နှစ်မြှုပ်သွားတဲ့ သင်္ဘောက Olympic အမည်ရ တိုက်တန်းနစ်ရဲ့  မောင်နှမ သင်္ဘော (Sister ship) ဖြစ်ပါတယ်။ Sister ship ဆိုတာ အရွယ်အစားရော၊ အတွင်းအပြင်ရော အားလုံးနီးပါး တူတဲ့ သင်္ဘောကိုခေါ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Olympic သင်္ဘောက အသက်ပိုကြီး ပါတယ်။
Olympic ကို တိုက်တန်းနစ်နဲ့ အတူတူ တည်ဆောက်ပြီး ၁၉၁၀၊ အောက် တိုဘာလမှာ ရေချပါတယ်။ တိုက်တန်းနစ်ထက် အများကြီး စောပါတယ်။ ပင်လယ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ၁၉၁၁၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ကျတော့ ဗြိတိန်တော်ဝင်ရေတပ် သင်္ဘော ဖြစ် တဲ့ HMS Hawke နဲ့ တိုက်မှု ဖြစ်ပွားပါတယ်။ နှစ်စင်းလုံး မမြှုပ်ပေမယ့် ကြီးကြီးမားမား ဒဏ်ရာကိုယ်စီ ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အိုလံပစ် သင်္ဘော ဆိုရင်အောက်ခြေနဲ့ ဘေးကိုယ်ထည်တွေ တော်တော်လေး ပျက်ဆီး သွားပါတယ်။ ယင်းတိုက်မှုမှာ အပြစ်ရှိသူကလည်း အိုလံပစ် သင်္ဘော ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ အိုလံပစ် သင်္ဘောက အာမခံ လျော်ကြေးငွေ မရတော့ပါဘူး။ ကုမ္မဏီ အနေနဲ့ကတော့ အာမခံလျော်ကြေးငွေ ရရှိလိုဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်ဆက်ဆက် တိုက်တန်းနစ်ကို အိုလံပစ်ဆိုတဲ့ အမည်ပြောင်းပေးလိုက် ပါတယ်။ အိုလံပစ်ကို တိုက်တန်းနစ် သင်္ဘောအဖြစ် နာမည်ပြောင်းပေး လိုက် ပြီး ခရီးများများ သွားခိုင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်ကို ခရီးသွားဖို့ ကြုံရပါတယ်။ အားလုံးနီးပါး ဆင်တူယိုးမှာ ဖြစ်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒီတော့ တိုက်တန်းနစ်အဖြစ် ဟန်ဆောင်ပြီး ခရီးသွားတဲ့ အိုလံပစ်က မခိုင်တော့တဲ့ အတွက် ကြိမ်းသေ တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကြိုတွက်ပြီး သား ဖြစ်ပါတယ်။ အိုလံပစ် အမည်ကို ပြောင်းလိုက်တဲ့ သင်္ဘောကတော့ ပထမကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်း မှာပဲ တိုက်ပွဲတွေကြား နှစ်မြှုပ်သွားတယ်လို့ ရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်။
၁၉၁၂ ဧပြီလ ၁၄ ရက်မှာတကယ်ပဲ နှစ်မြှုပ်သွားပါတယ်။ အားလုံးကတိုက်တန်းနစ်လို့ပဲ သိထား ကြပါတယ်။ ခရီးသည်ရော၊ သင်္ဘောသားတွေရော၊ သေဆုံးသူရဲ့  မိသားစုဝင် အသီးသီးရော၊ ကုမ္မဏီရော အားလုံး အသီးသီလျော်ကြေးငွေရရှိပါတယ်။ တိုက်တန်းနစ်ဟာ ဘယ်တော့မှမမြှုပ်နိုင်တဲ့ သင်္ဘောလို့ အားလုံးက အသိအမှတ်ပြုလက်ခံထားပေမယ့် တကယ် နှစ်မြှုပ်သွားခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့ပေမယ့် တိုက်တန်းနစ် ပိုင်ရှင် White Star Line ကုမ္မဏီ ဟာ ယနေ့မှာ ဆိုရင် ဗြိတိန်ပေါင် ၃၄ သန်းမကတဲ့ အကြွေးမြီနဲ့ နာမည်ဆိုး ကျန်ခဲ့စေ ပါတယ်။ ယနေ့တိုင် ရုံးဖွင့်ထားသေးပေမယ့် ဒေ၀ါလီ ခံရတော့မယ် ကုမ္မဏီ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်တန်းနစ် သင်္ဘောတကယ်မမြှုပ်ပဲသူ့နဲ့ဆင်တူ Olympic သင်္ဘောမြှုပ်သွားတယ်ဆိုတာကို Titanic: The Ship That Never Sank? အမည်ရ စာအုပ်မှာ လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
From : International news for myanmar
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 19:39
မြောက်ကိုရီးယားဒုံးကျည် အမေရိကန်သို့ ရောက်ရှိနိုင်...
ရော်နယ်ဒိုအား ပေါင်သန်း ၈ဝ ဖြင့် ခေါ်ယူရန် နည်းပြ ...
ပုဂ္ဂလိကမှ ရရန်အကြွေးကျပ်သန်းပေါင်း လေးသောင်းကျော်ရ...
၂၀၁၃ဇန်န၀ါရီရောင်းချ မည့် တန်ဖိုး နည်းဖုန်း အင်တာ ...
မြို့ပတ်ရထားစီးနင်း၍ ရန်ကုန်မြို့တွင်း လေ့လာလည်ပတ်...
အိုးအိမ်မှ လတ်တလောေ ဆာက် လုပ်မည့် တန်ဖိုးနည်း အိမ်...
ကားကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံး နေရာလွတ်မကျန်ရလေအောင် ကင်မရာန...
အစွမ်းထက်တဲ့ ဒုံးကျည်ထုတ်ဖို့ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်...
ညှို့မဂ္ဂဇင်းပါ ဓာတ်ပုံနှင့်စာသားများသည် လိင်ကိစ္စအသ...
ဒဂုံရွှေအောင်လံလုပွဲ အထူးပွဲစဉ်တွင် လူပုလေးနှစ်ဦး...